Thenga Isitika Sesikhashana Sokudweba Amanzi Sabesifazane | I-WoopShop®
Isitika seTattoo Yesikhashana Esingenamanzi Kwabesifazane
$ 3.99 Intengo ejwayelekile $ 5.99
Isitika seTattoo Yesikhashana Esingenamanzi Kwabesifazane - 20-FF082 ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Inombolo Yezingcezu: Iyunithi Elilodwa
Inombolo yesibonelo: X56212
Uhlobo: I-Tattoo Yesikhashana
Usayizi: 21X11.4cm / 8.26 "X4.48"
Ungasebenzisa esikhunjeni, izinsimbi zobumba, ingilazi ebusweni.
Amaphethini aklanyiwe aprintiwe, umbala okhanyayo futhi ubukeka njenge-tattoo yangempela.
Ukukhetha okuhle kakhulu njenge-tattoo yesikhashana, ukwakheka komzimba, futhi nakho kungamboza isibazi emzimbeni.
Ukugqoka okulula nokuhlanzekile okulula.
Ngokusekelwe kuzibuyekezo ze-62
Ukulethwa okusheshayo kakhulu. Ngiyala okwesibili futhi nganeliseke kakhulu.
Konke kuhambisana nencazelo. Izinga le-tattoo lihle kakhulu. Kukhanya kakhulu, kuhle. Uma wenza kahle, gcina amasonto angu-2 (ngize nginesikhathi eside) ukulethwa e-Irkutsk 3 amasonto. Siyabonga wooopshop